CEC Fort Collins West MS - Kulliyadaha Hore ee Colorado
Ku soo dhowow Dugsiga Dhexe ee CEC Fort Collins West!
Kulliyadaha Hore ee Colorado Fort Collins West MS (CECFCW) waxay albaabada u furtay 2019 iyada oo ah dugsi bilaash ah, isdiiwaan gelin furan oo ah dugsi dhexe. Waxaan nahay yar, loo dhan yahay, shaqsi gaar ah Dugsiga Dhexe kaas oo diiradda saaraya u diyaarinta ardayda manhajka la dardargeliyay ee adag ee CECFC High School. Waxaan u adeegnaa ardayda asal ahaan kala duwan waxaanan horumarinaynaa shaqsi kasta iyadoo la adeegsanayo maskaxda koritaanka. Hadafka CECFC West MS waa in lagu soo bandhigo manhaj adag iyadoo loo marayo jawi taageero leh. Fasalladayada 'Elevate fasalada' waxaan ku barnaa xirfadaha waxqabadka fulinta oo ay weheliso fasallada maaddooyinka muhiimka ah. Waxa inaga duwan iskuulada kale waa awooda aan u leenahay shakhsiyadeena gaarka ah iyo barida baahida arday kasta. Diiradeena ayaa ah guusha waxbarashada iyo ladnaanta shucuurta. Waxaan barnaa barnaamijyada shucuurta bulshada waxaanan leenahay fasal loogu talo galay ladnaanta shucuurta ardaydeena. Our Wolf Den waa meel aamin ah oo ay ardaydu ka heli karaan kala-jajabinta, dib-u-habeynta shucuurta isla markaana diirada saaraan ladnaanta shucuurta. Waxaan nahay Dugsi naxariis leh oo la aqoonsan yahay sidaa darteed waxaan diirada saareynaa in qof walbaa saaxiib la yahay qof walba. Ardayda ku dhibtooday waagii hore xiriir la yeelashada facooda waxay u arkaan dhaqankeennu inuu yahay mid soo dhaweyn iyo martiqaad leh. Ardaydeenu waxay isku taageeraan midba midka kale tacliin ahaan wuxuuna si togan u saameeyaa midba midka kale si uu ugu guuleysto.
Lacey Scadden - Maamulaha
Nagala soco Bulshada si aad ugu xirnaato CEC Fort Collins West Middle School. Saxiix wargeyskeena oo soo dejiso barnaamijka 'Infinite Campus' ee bilaashka ah si aad u hesho cusboonaysiinta iyo wararka.
Wararka ka imanaya CEC Fort Collins West MS
Marabtaa inaad waxbadan barato si aad u hubiso in CECFCW ay ku habboon tahay qoyskaaga? Ka soo qaybgal mid ka mid ah kulankeena macluumaadka, shakhsi ahaan ama gebi ahaanba. Kooxdayada hogaamintu waxay siisaa bandhig ku saabsan barnaamijyadeena, shaqaalaheena, dhaqanka anagana waxaan u joognaa inaan ka jawaabno wixii su'aalo ah ee aad qabto. Dooro taariikh hoos ku qoran iyo RSVP maanta!
Hoggaamintayada, Aqbalitaanka, iyo Kooxaha tacliinta ee CECFCW waxay aqoonsan yihiin mas'uuliyadda naloo aaminay si aan u gaarsiino saameyn togan oo cimri dheer ardaydeena iyo qoysaskooda, tacliin ahaan iyo nolol ahaanba. Xubin kastaa way fahamsan tahay oo ay wadaageysaa fulinta Bayaanka Howlgalka CEC iyadoo la adeegsanayo kheyraad kasta oo suurtagal ah iyo in la dhiso beel xoog leh oo kaamil ah oo ay ka buuxaan sharaf isla markaana ay horseed u tahay heer sare.
Kooxda Hogaanka CEC Fort Collins West
Lacey Scadden - Madaxa Dugsiga - View Profile
Laura Huber - Agaasimaha Dhaqanka Xerada - View Profile
Shaqaalaha Taageerada CEC Fort Collins West
Marika Le Fevre - Tech Tech / Day Xamaali - View Profile
Jule Zehrung - Diiwaanhayaha / Maareeyaha Ganacsiga - View Profile
CECFCW ahaan, waxaan fahamsanahay raadinta iskuulka saxda ah inay tahay waaya aragnimo shaqsiyeed iyo in nidaamka aqbalitaanku badanaa cabsi gelin karo oo ay adagtahay in la raaco. Shaqaalaheena Ogolaanshaha waxay u heellan yihiin inay qoysaska ka caawiyaan inay fahmaan nidaamkayaga iyo inay taageero ka siiyaan go'aankaaga ugu horeeya ee aad ku codsanayso isqorista illaa kullankaaga koowaad ee la-talinta.
Kooxda Ogolaanshaha Galbeedka ee CEC Fort Collins
Kooxda Tacliinta Sare ee CEC Fort Collins West
Dan Bentsen - Macallinka Xisaabta - View Profile
Nanette Bertoni - Farshaxanka, Muusiga, & Macallinka Masraxa - View Profile
Robert Bufton - Macalinka Sare - View Profile
Martin Carney - Macallinka Ingiriisiga - View Profile
John Paul Dieffenthaller - Macallinka Sayniska - View Profile
Helen Doetsch - Macallinka Shiinaha - View Profile
Cory Kness - Macallinka Waxbarashada Gaarka ah - View Profile
Andrew Pine - Macalinka Cilmiga Bulshada - View Profile
Matthew Snyder - Macallinka Isbaanishka - View Profile
Anthony Wilcox - Kaaliyaha Tacliinta - View Profile
CEC Fort Collins West waxay leedahay cunno cusub oo la diyaariyey oo loogu talagalay ardayda lagu diyaariyo jikadayada dhismaha ee Fort Collins. Dhagsii xiriirka hoose si aad wax badan uga ogaato cuntooyinkeena cajiibka ah, iyo inaad marin u hesho xiriiro foomamka qadada ee bilaashka ah iyo kuwa dhimay iyo macluumaadka ardayda.
Fadlan fiiri tabtayada Dukumintiyada iyo Foomamka macluumaadka iskuulka 2021 -2022
sida kalandarka iskuulka, jadwalka jalaska, liiska sahayda iyo inbadan!